Làlan'ny fampandrosoana - Eurborn Co., Ltd.
2020 no taona sarotra indrindra. Mba hamerenana amin'ny laoniny ny fiarahamonina sy ny mpanjifanay dia manandrana faran'izay tsara i Eurborn hanampiana ny rehetra. Nanome alikaola sy maska ​​be dia be izahay. Na inona na inona karazana olana, dia hifidy hiara-hiady aminao izahay.
Tamin'ny taona 2019, nisintona ny maha-olombelona sy ny kolontsaina, dia nanomboka nanome drafitra fitsangatsanganana isan-taona ho an'ireo mpiasamponay aloha izahay isan-taona.
Tamin'ny taona 2018, nampitombo ny refin'ny departemantan'ny varotra izahay ary namindra azy io tany amin'ny foiben'ny tanànan'i Dongguan.
Ao amin'ny 2017, ny lalantsara amin'ny fandroana rivotra dia hanampy. Izy io dia afaka mifikitra haingana amin'ny loto amin'ny lamba, volo ary potipoti-bolo, izay mety hampihena ny olan'ny fandotoana ateraky ny fidiran'ny olona sy ny fialany amin'ny faritra madio.
Ao amin'ny 2016, ny famolavolana anay rehetra dia feno miaraka amina fonosana CREE LED voalohany. Mba hahatratrarana ny kalitao tsara sy fanatsarana LED tsara indrindra, hamita ny dingana SMD manontolo ao an-trano.
Tamin'ny taona 2015, nanampy fitaovana 5 CNC nafarana avy any Japon sy milina fantsom-pitolomana Sodick 6 avy any Japon izahay.
Tamin'ny 2013, mba hahamety kokoa ny fanangonana angon-drakitra sy hahatratra ny fahafaha-mitahiry faran'izay betsaka, dia nohavaozinay ny marika manontolo ho an'ny marika "EVERYFINE", izay azo antoka sy azo antoka amin'ny asany ary manana fahaiza-manao fanoherana mahery vaika.
Tamin'ny taona 2012, mba hanomezana tombana azo antoka kokoa, azo ampiasaina, haingana sy marina ny spectrum, dia nosoloinay ilay tester an'ny spectrum taloha ary nampiasainay ilay mpandalina spectrum marika "EVERYFINE" mandroso.
Tamin'ny taona 2011, mba hihaonana amin'ny fenitry ny fanaraha-maso ny ozinina iraisam-pirenena dia nanomboka nanitsy ny tsipika famokarana izahay ary nanao fanofanana momba ny fandoroana afo ho an'ny mpiasa matetika.
TAMIN'NY taona 2010, nanomboka nandray anjara tamin'ny International Lighting Show ny ekipan'ny varotra anay iraisam-pirenena.
Tamin'ny 2008, nanampy ny andalana famokarana ny sampana bobongolo.
Eurborn Co., Ltd dia voasoratra ara-panjakana tamin'ny 2006.
Tantaran'ny orinasa ：